Dowladda oo kasoo dabacday mowqifkeedi guddiyadda doorashooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda oo kasoo dabacday mowqifkeedi guddiyadda doorashooyinka
Dowladda Federaalka ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay guddiyadda doorashooinka ee khilaafku ka taaggan yahay.
MUQDISHO - Ra'isul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda, Mahdi Maxamed Guuleed ayaa tanasul ka muujiyey mowqifka Dowladda Federaalka ee guddiyadda doorashooinka oo khilaaf ka taaggan yahay.
Mahdi oo ka hadlay maanta munaasabad ka dhacda Tiyaatarka Qaranka, ayaa sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay dib u eegis lagu sameeyo guddiyada doorashada.
Waxaa uu ka dalbaday madaxda Maamuladda iyo dhinacyada ay quseyso doorashada in la fuliyo heshiiska doorashada dadban ee horey leysugu afgartay.
Dhawaan, Mahdi oo khudbad ka jeedinayay Munaasabad kale oo ka dhacday Tiyaatarka Qaranka, wuxuu sheegay in wareegga kowaad uu Farmaajo ku guuleysan doono doorashada.
Hadalka Mahdi Guuleed ayaa imaanaya xili maanta magaalada Muqdisho ka dhaceen rabashado iyo iska horimaadyo ka dhashay dibadbaxyo looga soo horjeeda Dowladda Madaxweyne Farmaajo.
Dalka wuxuu ku jiraa marxalad cakiran, oo dhinac walba ah, oo ugu horreeyaan amniga iyo doorashooyinka oo Farmaajo waqtigooda ku qaban waayay, ee dib u dhaca ku yimid.
Arimaha hada la isku haysto ayaa kamid ah qaab dhismeedka guddiyada doorashooyinka ee lagu soo daray xubnaha NISA iyo shaqaalaha dowladda, si ay Farmaajo ugu hiiliyaan, islamarkaana codadka ugu shubaan.
Waa kuma Guuleed
Ra’iisulwasaare ku xigeenka dowladda Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa wacad ku maray in uu Difaac iyo gaashaanba u noqon doono Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo, Guuleed ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mas'uul musuq-maasuq badan islamarkaana nin jeclaysiga ku caan baxay.
Mahdi Guuleed waxa uu kamid yahay shaqsiyaadka daacadda u ah Madaxweyne Farmaajo, waa aftahan hadal macaan marka uu bulshada la hadlayo, waxaa lagu sheegaa in uu kamid yahay shaqsiyaadka shacbiyadda usoo jiiday kooxda Nabad iyo Nolol la baxday ee uu Farmaajo hoggaamiyo.
Guuleed ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mas'uul musuq-maasuq badan islamarkaana nin jeclaysiga ku caan baxay, isagoo labadii bilood ee uu ahaa sii hayaha xilka Ra'iisul Wasaaraha lunsadey lacag badan, sidoo kalena xafiiskiisa keenay dhalinyaro beeshiisa ah.